Duqa Seçer: Mersin Metro Maahan Mashruuc Gaadiid oo kaliya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinDuqa Seçer: Mersin Metro kaliya maahan Mashruuc Gaadiid
14 / 01 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, VIDEO
madaxweyne secaraat metro kaliya maahan mashruuc gaadiid, laakiin waa mashruuc wax ka badali doona magaalada
Duqa Magaalada Mersin ee Magaalada Vahap Seçer wuxuu martida u ahaa Emine Eroğlan barnaamijka loogu magac daray "Laga bilaabo Mediterranean ilaa Taurus" oo laga sii daayay raadiyaha TRT Çukurova. Duqa magaalada Seçer ayaa qiimeeyay 9 bilood ee ka harsan barnaamijka wuxuuna sharaxay mashaariicda degmada. Seçer wuxuu sheegay in Metro, oo ah halka ay ku dhufan doonaan qoditaankii ugu horreeyay sannadka 2020, kaliya maahan mashruuc gaadiid, laakiin waa mashruuc weyn oo wax ka beddeli doona oo wax ka beddeli doona magaalada. Seçer wuxuu carrabka ku adkeeyay in loo xayeysiin doono sidii darawalada basaska wax yar laga iibsan karo oo ay rabaan inay inta badan ka iibsadaan haweenka.
Vahap Seçer, Duqa Magaalada Caasimadda, wuxuu carrabka ku adkeeyay inay muhiimad gaar ah siinayaan shaqada haweenka ee degmo waxayna tiri:
Ama waxaan mudnaanta siinaa haweenka qoritaanka. Markii hore, iibsiyada waxaa la sameeyay iyada oo ay iskaashanayaan Agaasimaha Beeraha iyo Beeraha iyo Agaasimaha Ilaalinta Deegaanka. Waxaan leenahay 105 shaqaale, dhammaantoodna dumar ah. Nadiifinta jidadka Mersin ayaa la ogaaday. Sababtoo ah haweenku waa nadiifinayaan. Ma jiro torpedo, ma jirto tixraac siyaasadeed. Gerçekten Xaqiiqdii waan shaqeeyaa, waxaan qabtaa shaqadan diifka ah dhamaan dumarkayaga dumar ah ee la wareystay, waxaan helnay shuruudaha ku habboon. Aad ayaan ugu faraxsanahay iyaga. Caafimaadka gacmahaaga. Aniguba waan jeclahay iyaga. Taasi waa waxaan rabaa iyaga inay ka dhigaan magaaladeena nadaafad. 155 shaqo dheeri ah. Waa la wareystay. Iibsiyada ayaa bilaabmi doona maalmaha soo socda. Wareysiga Magacyada waa la shaacin doonaa. Laga bilaabo Anamur illaa Tarsus, waxaan ku sameyn doonaa jardiinooyin nasashada iyo nadaafadda deegaanka laga sameeyo degmooyinkayaga. Waxaan rabaa darawaladayaga baska inay noqdaan haween. Waxaan dhawaan shaqaaleysiinay shaqaale. Waxaan helnay 40 codsi. Runtii ku guuldareystay inuu gudbo imtixaanka, isteerinka ayaa la tirtiray, 33 darawallada baska ayaa qaatay. Haweenka. Si kale haddii loo dhigo, haddii imtixaan qaadayaashu aysan laheyn wax dhibaato sharci ama farsamo ah, dhammaantood waan shaqaaleysiinay. Hadda waxaan dib ugu noqonaynaa iibsashada mid. Mar labaad, darawalka dumarka ah ayaa inta badan ah. Waxaan u baahanahay 100 bas. Waxaan rabnaa inaan u abuurno jawi gaadiid dadweyne oo aad u deggan, oo raaxo leh dadka Mersin. 73 ka mid ah kuwan waa la iibsaday. Qandaraaska waxaa la qabtay 3dii Janaayo. Waxaa la soo gabagabeeyey hindisada. Waxaan u helnaa 100 darawal oo cusub baska cusub. Haddii haweenkeenna la ixtiraamo, badankoodu waxay noqon doonaan haween. Waxaan daneyneynaa wada shaqeynta haweenka. Waxaan aasaasnay ​​iskaashiga haweenka. Waxay qabtaan shaqo muhiim ah oo qiimo badan. Ujeedada ugu weyni waa in loo badalo wax soo saarka haweenka farsamada gacanta si loo qiimeeyo dhaqaalaha, gaar ahaan meelaha baadiyaha ah. Tani aad ayey muhiim u tahay. Wuxuu gacanta ku hayaa dhowr waxyaabood markiiba. Is-aaminiddu waxay u timaadaa haweeneyda, waxay ku taagan tahay labadeeda cagood waxayna ku kordhisaa miisaaniyada qoyska. Kuwani aad ayey muhiim u yihiin. ”
“Metro waa mashruuc casriyeyn”
Duqa magaalada Seçer wuxuu kaloo siiyay macluumaad ku saabsan mashruuca mitirka ee dhawaan la kireystay wuxuuna yidhi, “Gaadiidka dadweynaha waa muhiim. Metro kaliya maahan mashruuc gaadiidka dadweynaha. Dareen ahaan, waa mashruuc beddelaya magaalada. Waxaa loo malayn karaa inuu yahay mashruuc bulsho, iyo mashruuc ilbaxnimo. Sababtoo ah magaalada casriga ahi waxay ka dhigan tahay horumarka magaalada casriga ah dareen kasta. Wejiga koowaad waa inta udhaxeysa Mezitli-Gar inta udhaxeysa bari-galbeed. Markaa wajiga labaad iyo saddexaad ayaa la qaban doonaa. Markii aan nimid, maamulkii hore wuxuu lahaa mashruuc, laakiin uma arkin mid ku habboon. Waxaan ka qabanay xoogaa shaqo. Waxaan ku sii wadi doonnaa mashaariicdan cusub. Hadda waxaan ku jirnaa qandaraaska wajigii koowaad, 13.4 kiiloomitir oo nidaamka tareenka dhulka hoostiisa ah ”.
Haydarpaşa ma aha oo kaliya dhismo, waa xusuusta bulshada ee aadanaha
Marmaray ma aha oo kaliya Istuudiye, laakiin sidoo kale China iyo England
Erdogan: Marmaray waa ma aha oo kaliya Garaaci adduunka ee Turkey
TÜVASAŞ ee Turkey ma aha oo kaliya aad u muhiim u ah Sakarya
Tareenka dhakhsaha badan wuxuu qaadan doonaa rakaab maaha oo kaliya, laakiin sidoo kale waa socdaalka
Qofka Tuvasas ee Caalamka ah oo keliya Hal Qof
Waddada Aasiya ma aha Jidka kaliya
Madaxweyne Altunar oo Noqon Doonin Gaadiidka Xawaaraha Sare
Iibsiga Dowlada Hoose ee Mersin Iibinta darawalada basaska haweenka ah
Iibsiga baska Dawlada Hoose ee Mersin
Animada Mersin Metro
Filimka dhiirrigelinta Mersin Metro
Mashruuca Wadada Tareenka ee Mezitli